လျှာရင်းကလေး မြက်စေဖို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လျှာရင်းကလေး မြက်စေဖို့
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Jun 30, 2017 in Creative Writing, Drama, Essays.., Food, Drink & Recipes, My Dear Diary | 29 comments
ဦးကျောက်ခဲတို့ ကျောင်းသားဘဝက ကွင်းဆင်းရတာ့မယ်ဆို ပျော်လည်းပျော်တယ် စိတ်လည်းပိန်တယ်ခင်ဗျ ။ ပျော်တယ်ဆိုတာက ကျောင်းနေဘက် ဘော်ဒါတွေတလှေကြီးနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခရီးထွက်ရတာရယ် ၊ မရောက်ဖူးတဲ့ တောကြိုအုံကြား သွားရတာရယ်ကြောင့်ပါ ။ ညဘက်ဆို ဆရာတွေမသိအောင် ခြင်ထောင်တွေ ပိတ်ကာပြီး အံစာခေါက် ဖဲခိုးရိုက်လို့ရတာလည်း ပါတာပေါ့လေ ။ စိတ်ပိန်တယ်ဆိုတာကတော့ အထွေအထူးပြောစရာမလို အနေအစား ဆင်းရဲလို့ခင်ဗျ ။ ယောက်ျားလေးမို့ ဖြစ်သလိုနေ ဖြစ်သလိုအိပ်ရတာ ထူးထူးထွေထွေ ကိစ္စမရှိလှပေမယ့် ဝါးတီးမကောင်းတာတော့ အတော် ဆယ့်တစ်ကျပ်ကျဖို့ကောင်းတဲ့ အမှုဗျို့ ။ လူတွေက တနေကုန် ပင်ပင်ပန်းပန်း ကွင်းဆင်း ကျောက်နမူနာရှာ သယ်ရပိုးရတဲ့အထဲ ခါနာမဂွဒ်ရင် ရူပါက မလန်းဘူးလေ ။
ကွင်းဆင်းရိက္ခာ ဆိုတာကလည်း ရန်ကုန်က ဝယ်ပြီးသယ်လာတဲ့ ဘဲဥသေတ္တာလိုက်နဲ့ ညောင်ပင်လေးဈေးက ငါးကွမ်းရှပ်ခြောက် / ကကူ့ရံခြောက်တွေ ဆိုတော့ တစ်နပ်ကနေ နှစ်နပ်စားပြီးရင် လှည့်မကြည့်ချင်လောက်အောင်ပါပဲ ။ နယ်တွေမှာ ၊ အထူးသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာက မြို့ကြီးတွေမဟုတ်ရင် နေ့တိုင်း ဈေးမရှိ ၊ ဈေးနေ့ရောက်မှ အသားဝယ်လို့ရတာဆိုတော့ မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်း ၊ အနှီငါးခြောက် ဆားငန်ငန် နဲ့ ဘဲဥ ကိုပဲ ခရမ်းချဉ်သီးနိုင်နိုင်နဲ့ချက် ၊ အသီးအရွက်စုံနဲ့ရော ၊ ကိုယ့်အိမ်ကပါလာတဲ့ အသားခြောက်ကြော် ချဉ်ပေါင်ကြော်တွေနဲ့ လွှေးရတာပေါ့ဗျာ ။ ကိုယ်တွေမှာသာ အီဆိမ့် လိမ့်ပျံနေတာ အတန်းဖော် “မြင်းခြံသား ငထွန်း” ကတော့ စခန်းက ချက်ပေးတဲ့ ငါးခြောက်ဟင်းကို သူ့အမထည့်ပေးလိုက်တဲ့ “အညာ ငရုတ်သီးဆားထောင်း” နဲ့ တွဲစားပြီး ရှူးရှူးရှဲရှဲ ဟန်တွေကိုကျလို့ ။
အဲသည့်တော့ မောင်ကျောက်ခဲလည်း ငထွန်းရဲ့ ငရုတ်သီးဆားထောင်းကို နမူနာယူပြီး ထမင်းစားမြိန်စေဖို့ စု-တု-ပြု ရတော့တာပေါ့ ။ အညာထောင်းတွေက ငရုတ်သီးခြောက်ကို ညက်ညက်ထောင်းပြီး အသားခြောက် ငါးခြောက်တွေ ရောထောင်းထားကြတာပါ ။ ဘူမိကျောင်းတော်သားတွေက ကျောက်စိုင် ကျောက်သားတွေကိုသာ နမူနာယူဖို့ တူနဲ့ ဖဲ့နေကြတာ ၊ ငရုတ်သီးထောင်းဖို့ဆိုရင်တော့ ဝေါင်ဝေါင်ရှေးကြတာမို့ စားမြိန် လွယ်ကူ မြန်ဆန် အသုံးတည့်အောင် အောက်ပါနည်းအတိုင်း စီရင်လိုက်ပါကြောင်း …
(နှစ်သက်ရင် ဟင်းချိုမှုန့်ထည့်ပါ ၊ ဦးကျောက်ခဲနည်းကတော့ ဟင်းချိုမှုန့် မသုံးပါဘူး ခင်ဗျား)
“ပုဇွန်ခြောက်ထောင်း / ငါးရံ့ခြောက်ထောင်း”
– ပုဇွန်ခြောက် နို့ဆီဘူးဝက် (သို့) ငါးရံ့ခြောက် အသားမြောင်းချည်း တစ်ကောင်စာ (ငါးခြောက် တစ်ပြားစာ)
– ကြံသကာခဲ ၁-စင်တီမီတာ ပါတ်လည် တစ်တုံး
– ကြက်သွန်ဖြူ ၆-မွှာ
– ငရုတ်သီးစိမ်း ၈-တောင့် (အစပ်ကြိုက်လျင် ပိုထည့်ပါ)
– ဆား သဘောလောက်
ပုဇွန်ခြောက်ကို ရေမြုပ်ယုံစိမ်ထားပါ (၂-၃ နာရီခန့်) / ငါးရံ့ခြောက်ကို ရေစင်စင်ဆေး အကြေးတွေ ရေယက်တွေဖယ်ပြီး ရေများများနဲ့ စိမ်ထားပါ (၈-နာရီခန့်) ။ ပုဇွန်ခြောက်ကို ရေစစ်ပြီး မွနေအောင်ထောင်းထားပါ / ငါးရံ့ခြောက်ကို တစ်လက်မခန့် အတုံးလေးတွေ ပြန်တုံးပြီး မွနေအောင် ထောင်းထားပါ ။ အရိုးတွေ့ရင်လည်း တပါထဲ ဖယ်ထုတ်ထားပါ ။
ကြံသကာခဲ > ကြက်သွန်ဖြူ > ငရုတ်သီးစိမ်းတွေကို အစဉ်အတိုင်း ကြေသွားအောင်ထောင်းပါ ။ မွနေအောင် ထောင်းထားတဲ့ ပုဇွန်ခြောက် / ငါးရံ့ခြောက်နဲ့ ရောပြီးထောင်းပါ ၊ အရသာပေါ့လျင် ဆားအနည်းငယ် ထည့်ထောင်းပါ ။ အားလုံး သမသွားလျင် ပဲဆီ (သို့) သံလွင်ဆီ သဘောလောက်ဆမ်းပြီး ဗူးထဲထည့် ၊ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းပြီး တစ်ပါတ်ခန့်ထား စားသုံးနိုင်ပါပြီ ။
* အနှီ ပုဇွန်ခြောက်ထောင်း / ငါးရံ့ခြောက်ထောင်းကို သံပုရာရည်ညှစ်ပြီး ထမင်းပွဲမှာ ဟင်းရံအနေနဲ့စားစား ၊ နံနက်ခင်း ထမင်းကြော်နဲ့ပဲတွဲစားစား အလွန် နှုတ်မြိန်ပါတယ် ။ နောက်ထပ်အသုံးဝင်တာက ကစွန်းရွက်ကြော် ၊ ဟင်းရွက်သုပ် ၊ ချဉ်ရည်ဟင်းတွေမှာလည်း ဟင်းခတ်အဖြစ်ထည့်လို့ရသလို ငါးပိစိမ်းစားမီးကင်နဲ့ရောမွှေ သံပုရာရည်ညှစ်လိုက်ရင် ငပိထောင်းကောင်းကောင်းတစ်ခွက် ဖြစ်ပါသေးတယ် ။
“မန်ကျည်းသီးထောင်း / ဆီးဖြူသီးထောင်း / မရမ်းသီးထောင်း”
မန်ကျည်းသီးစိမ်းထောင်းမယ် ဆိုရင် အရင်ဆုံး အပြင်ခွံတွေ ခြစ်ထုတ်ပါ ။ လက်တစ်ဆုတ်စာ (သို့) နို့ဆီဗူးဝက် လောက်ဆို ရပါပြီ ။
ဆီးဖြူသီး / မရမ်းသီးစိမ်းထောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ၁၀-လုံးလောက်ကို ရေဆေး အစေ့နွှင် အသားထုတ်ပြီး ဆားနဲ့နယ်ပါ ။
ပြီးလျင် ဆန်ဆေးရည်ထဲ ၁၀-မိနစ်ခန့်စိမ်ထားပါ ။
ရေပြန်ဆေး ရေစစ်ထားပါ ။ ပြီးလျှင်-
– စိမ်းစားငပိ မီးကင် (မီးမကျွမ်းစေရ … ခါးတတ်ပါသည်) – စားပွဲတင် ၁-ဇွန်း
– ကြံသကာ – စင်တီဝက်ခန့်
– ငရုတ်သီးစိမ်း – ၂ တောင့်
– အပေါ်က ပုဇွန်ခြောက်ထောင်း ၅-ဇွန်းမောက်မောက်ခန့်ဖြင့် ရောထောင်းပါ ။ ချဉ် ငန် စပ် အထောင်းတစ်ခွက် ရပါပြီ ။
“ငါးကွမ်းရှပ် / ပင်လယ်ငါးခြောက်ထောင်း”
– ငါးခြောက် အသားမြောင်း တစ်မိုက်ခန့် ၈-ချောင်း
– ကြံသကာခဲ ၁-စင်တီမီတာ ပါတ်လည် နှစ်တုံး
– ကြက်သွန်ဖြူ ၈-မွှာ
– ငရုတ်သီးစိမ်း အနီ ၁၀-တောင့် (အစပ်ကြိုက်လျင် ပိုထည့်ပါ)
ငါးခြောက်တွေကို ရေဆေးသန့်စင်ပြီး ရေများများဖြင့် ညသိပ် စိမ်ထားပါ ။ ငါးခြောက်များကို ဆယ်ယူပြီး အနည်းငယ် မြည်းကြည့်ပါ ၊ ဆားငန်နေသေးလျင် ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူထဲ ဆား စားပွဲတင် ဇွန်းတဝက်ခန့်ထည့်၍ ၁၀-မိနစ်ခန့်ထားပါ ။ ပြီးလျင် ငါးခြောက်များကို ဆယ်ယူ၍ အရွယ်တော်တုံးပြီး မွနေအောင် ထောင်းထားပါ ၊ အရိုးပါလျင် ဖယ်ပါ ။ ကြံသကာခဲ > ကြက်သွန်ဖြူ > ငရုတ်သီးစိမ်းတွေကို အစဉ်အတိုင်း ကြေသွားအောင်ထောင်းပြီး မွနေအောင် ထောင်းထားတဲ့ ငါးခြောက်နဲ့ ရောပြီးထောင်းပါ ၊ ဆီကို စိုစွတ်စေယုံ ဖြန်းပေးပါ ။ ငါးခြောက်ထောင်း ရပါပြီ ။
* အနှီ ငါးခြောက်ထောင်းကို ချဉ်ရည်ဟင်းချက်လိုလျင် ဟင်းခတ်အဖြစ် သုံးနိုင်ပါသေးတယ် ။
– ဆိတ်သား / အမဲသား / ဝက်သား – တစ်ပေါင်/ကီလိုဝက်/၃၀-ကျပ်သားခန့်
– ငရုတ်သီးစိမ်း အနီ ၈-တောင့် (အစပ်ကြိုက်လျင် ပိုထည့်ပါ)
ဆိတ်သား / အမဲသား / ဝက်သား အဆီမပါ အသားသက်သက်ကို အရွယ်တော်တုံးပြီးလျင်
– ဆိတ်သား / အမဲသား (စပါးလင် ၁-ချောင်း ထုထောင်း ထည့် + ဆားအနည်းငယ်ထည့်၍ နယ်)
– ဝက်သား (ဂျင်း လက်တစ်ဆစ်ခန့်ကို ထောင်းပြီး အရည်ညှစ် ထည့် + ငန်ပြာရည် စားပွဲတင်တစ်ဇွန်းတို့ဖြင့် နယ်) တို့ကို ရေမထည့်ဘဲ မီးမျှင်းမျှင်းဖြင့် ရေခမ်းလုံးပါ ။ အသားများ အေးသွားလျင် ကြံသကာခဲ > ကြက်သွန်ဖြူ > ငရုတ်သီးစိမ်းတွေကို အစဉ်အတိုင်း ကြေသွားအောင်ထောင်းပြီး လုံးထားသော အသားများထည့်၍ သမသွားအောင် ရောထောင်းပါ ။ အရသာ ပြင်းပြင်းစားလိုပါလျင် အသားမှုန့် အနည်းငယ်ထည့်ပါ ၊ ဆီအနည်းငယ် ဆမ်းပြီးလျင် ထမင်းမြိန်စေသော အသားထောင်း တစ်ခွက် ရပါပြီ ။
* ဆတ်သားခြောက် / အမဲခြောက်ကို ရေခမ်းပြုတ်ပြီး အထက်ပါနည်းအတိုင်း ထောင်းစားနိုင်သလို ၊ ပွဲတော်များမှ စား၍မကုန်သော ကြက်ဆင်သား/ကြက်သားကင် များကိုလည်း ယခုလို ထောင်းစားနိုင်ပါသေးတယ် ။ သတိပြုရန်ကတော့ ကြက်ဆင်သားဆိုလျင် ကြံသကာနှင့် ဆား ပိုထည့်ပေးရပါမယ် ။
* အနှီအသားထောင်းကို Mayonnaise သုတ်ထားသော ပေါင်မုန့်/ပေါင်မုန့်မီးကင်တို့ဖြင့် တွဲဖက်စားသုံးလျင် အလွန်အရသာရှိပါကြောင်း ။
ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်းက မတိုမရှည်ဖြစ်နေလို့ နောင်မှ ကြက်ဆီထမင်းနဲ့ တွဲပြီး ရေးပေးပါ့မယ် …
နေမကောင်း၊ ခံတွင်းမလိုက်၊ ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်
ဗိုက်က ထပ် အချက်ပြတယ်။ ဂွီ တဲ့
ဂွီ ကနေ … ဂွမ် ကနဲ … ဘွမ် ကနဲ ဖြစ်သွားအောင် …
မရမ်းသီးထောင်းနဲ့ ဆန်ပြုတ်စား … အလဂါးပြောတာ …
နေမကောင်းရင် ငါးခြောက်ထောင်း အသားထောင်းနဲ့ ဆန်ပြုတ်သောက်…
ငါးခြောက်ထောင်းနဲ့ အမဲသားထောင်းလေး သဘောကျမိ ကြံသကာထည့်တာ အရသာပိုကောင်းသွားတာလား သိချင်မိတယ်။
သကြား – ကြံသကာ – ထန်းလျက် … ချိုတာချင်းတူပေမည့် ကယ်မစ်စတြီ မတူပါဘူး …
ဟင်းချိုမှုန့်မသုံးတော့ ကြံသကာကို အစားထိုးသုံးပါတယ် …
အရသာ ပို လေးပင်ပြီး လျှာမစွဲ ရေမငတ်ပါဘူး … သကြားလို အချိုမစူးပါ …
ကြံသကာနဲ့ အရိုးပြုတ်ရည်ကို အချိုးကျစပ်တတ်ရင် ဟင်းချိုမှုန့်ထက် ပိုကောင်းပါ၏…
ကျေးဇူးပါ ပြန်ရင် ကြံသကာသွားဝယ်တော့မယ်။
အဖိုးတန် ပို့(စ) ကိုကိုကျောက်။
ဟင်းချက်နည်းလေးတွေချည်း မတင်ပဲ ကျန်တဲ့ စာသားလေးတွေပါ တင်ပေးသင့်တယ်လေ။
ကြော်ရင် ညှော်တယ် … ဆီကုန်တယ် … အရသာရိုးတယ်…
“မှို” ကြောက်လို့ ငရုတ်သီးခြောက်ကို မသုံးပါဘူး …
ဟင်းချိုမှုန့်မပါ သဘာဝတွေချည်းဆိုတော့ ကျန်းမာရေးလည်း ညီညွတ် …
အလွန်လွယ်ပြီး အသုံးတည့်တယ် အန်တီအေးရဲ့ …
ခပ်များများလုပ်ပြီး ဗူးကြီးနဲ့ သိမ်းထားရင် ဟင်းချက်တိုင်း အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူး…
မန်ကျည်းသီးစိမ်းထောင်းမယ် ဆိုရင် အရင်ဆုံး အပြင်ခွံတွေ ခြစ်ထုတ်ပါ။
ဆီးဖြူသီး / မရမ်းသီးစိမ်းထောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ၁၀-လုံးလောက်ကို ရေဆေး အစေ့နွှင် အသားထုတ်ပြီး ဆားနဲ့နယ်ပါ။
ပြီးလျင် ဆန်ဆေးရည်ထဲ ၁၀-မိနစ်ခန့်စိမ်ထားပါ။
စိမ်းစားငပိ မီးကင် (မီးမကျွမ်းစေရ … ခါးတတ်ပါသည်) – စားပွဲတင် ၁-ဇွန်း ၊
ကြံသကာ – စင်တီဝက်ခန့် ၊
ငရုတ်သီးစိမ်း – ၂ တောင့် ၊
အပေါ်က ပုဇွန်ခြောက်ထောင်း ၅-ဇွန်းမောက်မောက်ခန့်ဖြင့် ရောထောင်းပါ ။
ချဉ် ငန် စပ် အထောင်းတစ်ခွက် ရပါပြီ ။
ဒါမိုး ပြန်စဉ်လို့ ရလားး ကျောက်??
ကျိုင်းစူးပါစင့် … အဲ ခင်ည …
အထောင်းတွေက စားရင်သာ စားကောင်းတာ.. လုပ်ရတာ လက်ဝင်တယ်နော်.
ရှမ်းဆိုင်တွေမှာ အာလူးထောင်း ဆိတ်သားထောင် ကြိုက်တယ်..
ယိုးဒယားဆိုင်တွေမှာ သင်္ဘောသီးထောင်း ပြောင်းဖူးထောင်းကြိုက်တယ်..
ငါးကြော်ကို ထောင်းတာဆိုလား.. အဲဒါလည်း လုပ်ဖူးတယ်..
ဒီခါ ပြန်လာရင် အာ့ဒေ ထောင်းကျွေးမှာလားဟင်
အထောင်းတွေက ဟင်းချက်ရသလောက်တောင် လက်မဝင်ပါဘူး …
အဲ … ထောင်းရတာ လက်ညောင်း လက်အံသေတာတော့ ရှိတာပေါ့ …
အသားတွေ ငါးခြောက်တွေသာဝယ်ခဲ့ … ထောင်းကျွေးမယ် … ခွိ
ငရုပ်ဆုံနဲ့.. တဒိုင်းဒိုင်း ထောင်းလို့မရတဲ့နေရာ နေသူများအတွက်..တခြား အလွယ်နည်းများရှိလား..။
အ၀တ်နဲ့ပါတ်ပြီး.. ဖရီးဝေးပေါ်ခဏပစ်တင်လိုက်ပါ လို့တော့ မလုပ်နဲ့နော..။
အဲဒါတော့ မရဘူး သဂျီး … Chemical Reaction မတူဘူး …
ဟင်းချက်ဖို့ ငရုတ်သီး ကြက်သွန်ကို မထောင်းဘဲ Blender နဲ့ ကြိတ်ကြည့် …
အရည်တွေအများကြီးထွက်ပြီး ဆီသတ်ချက်ချက် ၊ လုံးချက် ချက်ချက်…
အနံ့ အရသာ အကွာကြီးကွာပါတယ် …
ကျနော်တို့လည်း တိုက်ခန်းမှာနေတာမို့ ထောင်းမယ်ဆို …
ငရုတ်ဆုံအောက်မှာ အဝတ်ဟောင်းတွေခုပြီး သမလိုက်တာပဲ … ရှော့မရှိပါဘူး ခီညာ
ထောင်းတာကို သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေက.. မြန်မာ.. ထိုင်း.. စတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေလို့..
ဥရောပသားတွေရဲ့ အစားအသောက်ထဲများ.. ထောင်းတာတွေ စွတ်ပါနေရင်.. သူတို့တွေ.. “ထောင်းတဲ့စက်”ထွင်ချင်ထွင်မှာ..။
အဲ့ဒါပြောချင်တာ အထောင်းဟင်းလျှာတွေ ထိုင်းနံငံလိုမြန်တျံ့ပြည်ထဲတွင်ကျယ်လာလို့မဖစ်ဘူး ၇၀ကျော် ၈၀တန်း အဘွားတွေပြတ်သလောက်ဖစ်လာချိန်မှာ ငရုတ်သီးအတောင့်တွေကို အမှုန့်ဖစ်အောင်ကိုယ်တိုင်ထောင်းစားတဲ့ အထောင်းယဉ်ကျေးမှုပပျောက်သလောက်ဖစ်နေဘီ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်က ကျော်တို့အပေါ်ထပ်က နေ့စဉ်တိုင်းလိုလို
ဘာတွေထောင်းစားမှန်းမသိ အမြဲထောင်းစားတတ်တဲ့အိမ်ကြောင့် အောက်ထပ်နေကျော်တို့တဲ့ နောက်ဖေးမီဖိုခန်းမျက်နှာကျက် အင်းဂဒေမျက်နှာပြင်အကျယ်၎ပေ ၅ပေလောက်ရှိတဲ့ အချပ်လိုက်ကြီး ဝုန်းခနဲပြိုကျလာတာကို ပြန်ပြင်ထားရတာပါ အခုလိုဟော်တယ်စာရှုံးမယ့် အရသာနဲ့ အထောင်းဟင်းလျှာတွေသာကျယ်ပြန့်သွားဂဲ့ယင်….. :'(
လူလို မထောင်းတတ်သူရယ် ကန်ထရိုက်တိုက်ရယ် ဆုံမိကြတာကိုး…
ငရုတ်ဆုံအောက်မှာ ခြေနင်းဝတ်ထူထူခုပြီး တန်သင့်ယုံထောင်းရင် ဘာမှမဖစ်ပါဘူး…
အပြောမစောနဲ့ … အသက်ကြီးလာလို့ သွားတွေမရှိတော့ရင် ထောင်းစားရမှာ …
ဆရာကြီး သော်တာဆွေတောင် မဝါးနိုင်တော့လို့ ဘဲကင်ကို ထောင်းစားခဲ့ရသတဲ့ …
ဒေါ်ကြောက်ဂဲ လို့ ပဲ နံမယ်ပြောင်းလိုက်ပါဒေါ့
သရေကျလို့မရဘူး … အနိုင်ကန်ရမှာ…
ဒေါ်ကြောက်ဂဲ ပြောင်းစရာမီလို …
အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ စားဖိုမူးတွေက အထီးဒွေ…
အထောင်းပိုစ့်ကို ကြည့်ပြီး သွားရည်ကျတယ်…။ အကုန်အကြိုက်တွေချည်းပဲ…
မန်ကျဉ်းထောင်း ဇီးဖြူသီးထောင်းလဲ မစားရတာကြပြီ.. ဂလု..
သွားရည်ကျရင် ထောင်းစား … “ထ” နော် “တ” မီဟုတ်ဘူး …
ခပ်များများ တစ်ခါထောင်းထားရင် အကြာကြီးထားပြီး စားလို့ရပါတယ် …
save ပြီလေ. . .
ပြီးရင် ထောင်းစားလေ …
စား ဆား … သဘောရှိ …